प्राण जाने भयो पत्रकारको ! – Online Marg
प्राण जाने भयो पत्रकारको !
Posted on Friday, February 14th, 2020 10:25 AM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
खबरकर्मीहरुकै खबर कति दुःखलाग्दो भने, जागिर छाडौँ– तलब स्वाहा । तलब माया मारौँ, बाँच्न गाह्रो । त्यसमाथि ‘काम छाड्छु’ भनेको सुन्दामात्रै पनि व्यवस्थापनबाट धम्की शुरु हुने !
‘ठूला’ भनिने सबैजसो मिडिया हाउसका यी दुःख अहिले एभेन्युज टेलिभिजनमा पनि बल्झिएको छ । मिडिया बजारमा काम जान्ने पत्रकारको अभाव देखिएपछि तलब नदिइएका पत्रकारलाई फकाएर, तर्साएर भए पनि काममा लगाइरहनुपर्ने बाध्यतामा उक्त च्यानल परेको हो । केही महिनाअघि एभेन्युजका संस्थापक समाचार सम्पादक केदार कोइराला त्यहीँ फर्किए । तर, ११र१२ वर्षदेखि काम गर्र्दै रहेका किशोर चौधरी, विशेष रेग्मी, शुभक महतोहरुले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । काम छाड्छु भन्दा धम्कीको वर्षा छ ।
जतिसुकै धम्की आए पनि चार महिनाको तलब थापेको भोलिपल्टदेखि काममा नजाने मनस्थितिमा छन् । निर्धा पत्रकारहरु यो हालतमा छन् तर केदार कोइराला, चिरञ्जीवी शाहहरुलाई नबिच्क्याउनका लागि व्यवस्थापनले अलग्गै माया दिएर राखेको छ ।
त्यहाँ दुईजना नयाँ रिपोर्टर छिर्दा पाँच–सात जना पुरानाले काम छाड्ने भन्दै छन् । लेखा शाखाका शरद् केसी चर्को चेपुवामा छन् । ‘त्यत्तिकै काम छाड्न पाउँछस् ? कि त क्षतिपूर्ति तिर्’ भन्दै पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने बाध्यता छ ।
केही समयअघि सातजना क्यामेरा पर्सनले एकैदिन राजीनामा दिएका थिए । तिनलाई पनि ‘क्षतिपूर्ति तिर, नत्र पानीमुनि गए पनि हामी छाड्दैनौँ’ भन्दै व्यवस्थापनले फोन गर्न छाडेको छैन । भाष्करराज कर्णिकारजस्ता व्यवसायिक मिडिया मालिकले बुझ्नुपर्ने हो– तलब नपाएर काम छाडेका पत्रकारले क्षतिपूर्तिचाहिँ कहाँबाट तिर्छन् ? –जनआस्था साप्ताहिकबाट
Posted in पत्रपत्रिका समाचार
काठमाडौंको क्याम्पस भित्रै छात्रा बलात्कृत
काठमाडौंको मीनभवनस्थित नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्रा क्याम्प
साउदीमा अलपत्र ३८ नेपाली चार दिनदेखि भोकभोकै !
साउदी अरबमा अलपत्र ३८ नेपाली चार दिनदेखि भोकै भएको पीडितहरुले बताएका छन् । �
सेनाको हेलिकप्टर लिएर गएका रक्षामन्त्री कालापानी नपुगी किन टाप कसे ?
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोली सोमबार सेनाको हेलि�
खरिपाटी क्वारेन्टाइन पुग्दा जे देखियो..
कोभिड नाइन्टिन (कोरोना भाइरस) को प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल�
बालुवाटार जग्गाकाण्डः भाग्ने आशंका गरिएका यिनलाई पक्राउ गर्ने तयारी !
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नविरुद्ध नेपा�
अर्जुन कार्की पत्निमाथि हत्याअघि यस्तो ज्यादती: सिसिटीभीमा नदेखिएको यो एउटा कुरा !
कामदारमा महिला अंगप्रतिको आशक्ति– प्रहरीस्रोतका अनुसार यो हो सानेपामा पू�
बल्ल १ बर्षपछि पत्ता लागे निर्मला पन्तका दोषी, आमाले नै शंका गरेका व्यक्ती रहेछन् !
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बला�
नयाँ आइजिपी नियुक्ति नहुँदै यस्तो तयारी
सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरिक्षक नियुक्ति नगर्दै प्रहरी प्रधान का�
फेरि १ जना नेपालीमा कोरोना भाईरस देखियो, एयरपोर्टबाटै हस्पिटल भर्ना
चीनबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा अहिलेसम्म फैलिनसके पनि च�
एमसीसीको पक्षविपक्षमा बहस भईरहेका बेला सरकारले चाल्यो यस्तो कदम, अब के हुन्छ ?
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने ५० करोड अ�
कोरियामा ४० हजार नेपाली कोरोनाभाइरसको जोखिममा
यी ७ व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् अनार, नत्र पछुताउनु पर्ला
मिश्रले खोले अर्को पोल, प्रधानमन्त्री ओलीलाई मैले अडियो दिएकै छैन् (भिडियोसहित)